Hay’adda Quba-joogga J.Somaliand oo Jaaliyadda Soomaaliland ee Sucuudi Arabiya u qabatay Kulan lagu Asaasayo Gudiga Jaaliyadda – Somaliland Diaspora Office
HomenewsNews in SomaliHay’adda Quba-joogga J.Somaliand oo Jaaliyadda Soomaaliland ee Sucuudi Arabiya u qabatay Kulan lagu Asaasayo Gudiga Jaaliyadda
Hay’adda Quba-joogga J.Somaliand oo Jaaliyadda Soomaaliland ee Sucuudi Arabiya u qabatay Kulan lagu Asaasayo Gudiga Jaaliyadda
Hay’adda Qurba-joogga JSl ayaa iskugu yeedhay kulan wadatashi xubno ka tirsan jaaliyada Somaliland ee Sucuudi Arabiya. Kulankan oo u jeedadiisa ugu wayni ahayd inay xubnahaasi sameeystaan gudi ayaa waxa uu ka dhacay hoolka xafiiska qurba-joogga ee Wasaaradda Arrimaha Dibedda & IC. Ugu horeyn waxa kulankaas furay Wasiirka Arrimaha Dibedda mudane Dr. Sacad Ali Shire. Mahad-naq balaadhan ka dib, wasiirku waxa uu ku nuux-nuux saday ahmiyadda ay leedahay iyo fursadda wanaagsan ee manta ay iskugu yimaadeen in la dhiso oo dhidibada loo taago gudiga jaaliyadda Soomaaliland ee Sucuudiga. Waxa kale oo wasiirku sheegay in ay tahay maalin taariikhi ah maanta maadaama ay isku soo beegantay aasaaska gudiga Jaaliyadda iyo xuska dabaaldaga maalintii xoriyadda ee Sucuudiga. Dr. Sacad isaga oo hadalkiisa sii wata waxa uu dulmaray qaabka ugu haboon ee loo samayn karo gudiga isaga oo ku amaanay in ay yihiin kheyraad muhiim u ah dalka. Waxa kale oo uu sheegay in uu ku faraxsan yahay isku imaatinka caawa ee xafladda dabaaldagga xoriyadda sucuudiga ee lagu qabanayo hudheelka Karawn (Hotel Crown) ee magaaladda Hargeysa, 23ka bisha 9aad, 2018.
Waxa isaguna halkaa kala hadlay xubnihii halkaas iskugu yimid gudoomiyaha Hay’adda Qurba-joogga mudane Cabdi Cabdullahi Xirsi (Dayax-weerar), isaga oo u mahad celiyey dhamaan kuna amaanay kaalinta weyn ee ay ku leeyihiin horumarka dalka. Gudoomiyuhu waxa uu hambalyeeyey samaynta gudigaas taas oo ahayd ujeedadii la iskugu yeedhay xubnahaas. Waxa kale oo xusid mudan in uu u jeediyey hadal gaaban oo u badnaa wacyi galin iyo dhiiri galin sidii wadanka loo ilaashan lahaa. Waxa uu carabka ku adkeeyey muhiimadda ay leedahay xoriyadda taas oo uu is barbar-dhigay xukumadii Somaliya iyo maanta oo Somaliland la yahay waxana kamid ahaa hadaladisii, “maanta cidna ima odhan karto xunyahow xunku dhalay….. ku noqo gobolkaagii.”
Waxa uu sidii caadiga ahayd uga waramay taariikhda Ha’adda, shaqada uu qabto xafiiskiisu, iyo fariinta uu gudbiyo marka uu safaradda shaqo ugu baxayo dibadda. Fariintaas oo ah isku duubnaan, wada-jir iyo wax wada lahaansho si dalka loo dhiso oo iftiiminta cudurka hor taagan oo ah qabyaalad. Ugu dambeyna waxa uu ka codsaday in ay wax la qabtaan oo aanay marna ka caajisin. Ugu dambeysna waxa uu ka codsaday in ay wada fadhiistaan oo shirka sii wataan isaga oo intaa ku daray in ay shaqaalaha iyo isguba ka baxayaan hoolka, si ay kali iskugu noqdaan, si ay u dhistaan gudi.